तरुण दलकी नेतृ बुहारीमाथि हिंसा गरेको आरोपमा पक्राउ, सांसद पौडेल पिडकलाई भन्छिन् –‘म छु नडराउ’ - Nari Post
You are at :Home»नारी हिंसा»तरुण दलकी नेतृ बुहारीमाथि हिंसा गरेको आरोपमा पक्राउ, सांसद पौडेल पिडकलाई भन्छिन् –‘म छु नडराउ’
तरुण दलकी नेतृ बुहारीमाथि हिंसा गरेको आरोपमा पक्राउ, सांसद पौडेल पिडकलाई भन्छिन् –‘म छु नडराउ’
विराटनगर, २७ कात्र्तिक ।
लामो समय राजनीति गरेर सामाजिक सुधारको पक्षमा काम गर्ने महिला नेतृबाटै विराटनगरमा जघन्य प्रकारको महिला हिंसाको घटना भएको छ ।
बुहारीमाथि पटक पटक हिंसा भएको सहन नसकेपछि टोलसमाजले विराटनगर १ का खगेन्द्र घिमिरे र तरुण दलकी केन्द्रीय नेता होमा घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएका छन् । होमा घिमिरेले आफ्नी बुहारी देविका कंडेल घिमिरेलाई विगत पाँच वर्षदेखि मानसिक यातना दिएको र पछिल्लो एक वर्षदेखि पटक पटक कुटपिट गर्दै आएकी थिइन् । आइतवार राती पनि त्यसरी नै कुटपिट गरेपछि आक्रोशित स्थानीयले विराटनगर १ का ३८ बर्षीय खगेन्द्र घिमिरे र ४० बर्षीया होमा घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन् ।
खगेन्द्र विदेश गएपछि भाइसँगको सम्वन्ध विच्छेद गराउने उद्देश्यले होमाले बुहारीमाथि कुटपिट गर्न थालेकी हुन् । उनलाई परिवारका अन्य सदस्यले पनि साथ दिएका थिए । श्रीमान आएपछि सबै समस्या समाधान हुने आशमा देविका थिइन् । असार महिनामा श्रीमान पनि विदेशबाट फर्किए । तर श्रीमान पनि उनको विपक्षमा मात्र उभीएनन् दिदीसंगै कुटपिटमा उत्रिएपछि उनी थप पीडित बनेकी थिइन् । त्यही क्रममा देविकामाथि आइतवार राती आक्रमण गरियो । देविका आफ्नो छोरीको भविष्यलाई हेरेर हिंसाको घटना सार्वजनिक गर्न डराएकी थिइन् ।
तर आइतवार टोलसमाजले पनि सहन गर्न सकेन र प्रहरीको साहारमामा होमा र खगेन्द्रलाई पक्राउ गराए । खगेन्द्रसंग पाँचवर्ष अगाडी विवाह गरेकी देविकाकी एक छोरी छिन । विवाह भएपछि नै मानसिक यातना दिन शुरु गरेका उनिहरुले एक बर्ष अगाडीदेखि कुटपिट गर्दै आएको प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा भनेका थिए । देिवका र खगेन्द्रबीच विवाह भएपनि अहिलेसम्म विवाह दर्ता र छोरीको जन्मदर्तासमेत गरिदिएका छैनन् । श्रीमतीलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै श्रीमान र घरपरिवारले यातना सहन बाध्य पारिएपछि विराटनगर–१ का स्थानीयहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
कार्तिक २५ गते आइतवार विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विवाह दर्ता, छोरीको जन्मदर्ता र खानलाउने प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएपछि राती उनिमाथि कुटपिट भएको अधिकारकर्मी योशा गुरागाइँले बताइन । उनले देवीकालाई घरबाट हटाउन सम्पती लुकाउने र सम्बन्ध विच्छेद गर्न दवाव दिदै यातना दिदै आएको थिए । देविकामाथि कुटपिट तथा मानसिक यातना दिएपछि कानुनी उपचारका लागि प्रहरीमा उजुरी गरिएको पीडितका दाजु कृष्ण कंडेलले बताए । खगेन्द्र बैदेशिक रोजगारी बाट फर्किएका हुन भने देवीका विराट नर्सिङ होममा काम गर्छिन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ महिला बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जमुना बस्नेतका अनुसार पीडित कंडेलका श्रीमान् खगेन्द्र र आमाजु (दिदी) होमा घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिए्र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
डा. मिनेन्द्र रिजालको नाम लिएर हिंसाको बचावट
बुहारीमाथि पटक पटक कुटपिट गरेकी होमाले आफुलाई कसैले केही गर्न नसक्ने चेतावनी दिएकी छन् । प्रहरी हिराशतमै रहेकी उनले भनिन् ‘यस्ता जाबो टोलसमाज एक मिनेटमा किनिदिन सक्छु, मलाई मान्छेले चिनेकै छैनन् म डा. मिनेन्द्रको मान्छे हुँ ।’
प्रदेश सांसद शान्ता पौडेल पिडकलाई भन्छिन् ‘तिम्रो लागि म छु’
सोमवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा नेताहरुको घुइचो नै लागेको थियो । देवकामाथि भएको कुटपिटमका होमा पक्राउ परेपछि उनलाई छुटाउन काग्रेंसका नेताहरुको बाक्लो आउजाउ थियो । त्यहि मेसोमा प्रदेशसभा सदस्य शान्ता पौडेल पनि प्रहरी कार्यालय पुगिन् र उनले होमालाई भेटिन् । भनिन् ‘तिम्रो लागि जे गर्नुपर्छ म गर्छु तिमि चिन्ता नगर । म तिम्रो साथमा छु ।’ जनप्रतिनिधि पिडीतको साथमा हुनु पर्ने हो । हिंसाको विरोधमा हुनु पर्ने हो तर उनी पिडकको साथमा भएको खुलेआम बताइरहेकी थिइन् । यसले महिला हिंसाका घटनामा महिलाहरु नै बढि जिम्मेवार पो छन् कि भन्ने कुरालाई थप बल पु¥याएको देखाएको छ ।
naripost 10 Jan 2019
दलित र जनजाति महिलालाई नेतृत्व विकास तालिम
बगाले कोन्मे दिदी बहिनी परिवार दुर्लुङको पांचौ वार्षिकोत्सव सम्पन्न